Zithole ukwelulekwa izintombi-nto esifundeni seLembe | News24
Durban - Zithole izeluleko zokugcina izintombi-nto ezivela kuso sonke isifunda seLembe, ngaphambi kohambo lwazo oluya eMkhosini Womhlanga, oba minyaka yonke esigodlweni seSilo samaBandla onke KwaNongoma, eNyokeni, ngenyanga ezayo.
IKhansela uDolly Shandu oyiSekela leMeya esifundeni seLembe uthe kubalulekile ukuthi uhulumeni ubonge kakhulu abazali bezintombi kanye nomama abazihlolayo ngomsebenzi omuhle wokuqinisekisa ukuthi izingane zamantombazane ziyabugcina ubuntombi bazo.
UShandu ubuye wagqugquzela izintombi ukuthi zibike njalo uma kukhona abantu abazinukubezayo, wathi okubuhlungu kakhulu ngukuthi abantu abajwayele ukuthinteka ezenzweni zokunukubeza amantombazane asemancane kuyaye kube ngamalungu omndeni.
OLUNYE UDABA: IZITHOMBE: Izintombi zaseMhlangeni
UMzimela obemele umndeni waseNdlunkulu yena unxuse izintombi ukuba ziqaphele kakhulu uma zifika esigodlweni seSilo, futhi zihambe ngandawonye ukuze kungabi khona izingozi ezizithola sezilengela kuzo.
Umasipala wesifunda seLembe uyaye uqoqe izintombi nto ezisuka ezindaweni ezifana nakwaDukuza, eMandeni, kwaMaphumulo kanye naseNdwedwe ezizohambela lo mkhosi ngenhloso yokuzipha izeluleko zokugcina njengoba ziyomela isifunda kulo mkhosi omkhulukazi weSizwe samaZulu, kubika i-KZN Eyethu.